IOS na MacOS | January 2020
Isi IOS na MacOS
Mgbe ntọhapụ nke ikpeazụ MacOS Sierra, ị nwere ike ibudata faịlụ nwụnye na Store Store maka n'efu n'oge ọ bụla ma wụnye ya na Mac gị. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ, ị nwere ike ịchọta nrụnye dị ọcha site na ịpị USB, ma ọ bụ, ikekwe, ịmepụta ngwa USB flash nwere ike ịwụnye maka iMac ma ọ bụ MacBook (dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị nweghị ike ịmalite os na ha).
Ntuziaka nzọụkwụ a na-egosi ọtụtụ ụzọ isi mee ka Mac OS X Yosemite bootable USB stick mfe. Ụdị ụgbọala a nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ dị ọcha nke Yosemite na Mac, ịkwesịrị ịwụnye ngwa ngwa na ọtụtụ Macs na MacBooks (na-enweghị nbudata ya na onye ọ bụla), kamakwa iji wụnye na kọmputa kọmputa (maka ụzọ ndị eji nkesa mbụ).
Kọmputa adịghị akwado ụfọdụ atụmatụ multimedia mgbe ị wụnye iCloud
Mgbe ị wụnye iCloud na kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ na Windows 10, ị nwere ike izute mmejọ ahụ "Kọmputa gị anaghị akwado ụfọdụ ihe nchọgharị multimedia." Download Media Feature Pack maka Windows site na weebụsaịtị Microsoft "na" window ICloud Windows Installer Error ". Na ntụziaka a site na nkwụsị ụkwụ, ị ga-amụta otú ị ga-esi dozie njehie a.
Otu esi jikọọ USB flash drive na iPhone na iPad
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ijikọ USB drive USB na iPhone ma ọ bụ iPad iji detuo foto, vidiyo ma ọ bụ ụfọdụ data na ya ma ọ bụ site na ya, ọ ga-ekwe omume, ọ bụ ezie na ọ bụghị dị mfe maka ngwaọrụ ndị ọzọ: jikọọ ya site na "nkwụnye ọkụ "ọ gaghị arụ ọrụ, iOS naanị agaghị ahụ ya." Akwụkwọ ntuziaka a na-akọwa n'ụzọ zuru ezu otú esi ejikọrọ eriri flash USB na iPhone (iPad) na ihe na-agaghị emeli mgbe ị na-arụ ọrụ dị otú ahụ na iOS.
TV TV na Android, iPhone na mbadamba
Ọ bụrụ na ị nwere TV nke oge a nke jikọtara netwọk ụlọ gị site na Wi-Fi ma ọ bụ LAN, ọ ga-abụ na ị nwere ohere iji ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba nkume na gam akporo na iOS dị ka ebe dịpụrụ adịpụ maka TV a, ihe niile ị chọrọ bụ ibudata ngwa ngwa site na Ụlọ Ahịa Play ma ọ bụ Ụlọ Ahịa Store, wụnye ya ma hazie iji.
Etcher - mmemme multiplatform n'efu ka ịmepụta ngwa mgbagwoju anya
Ihe omume ndị a na-ewu ewu maka ịmepụta draịva USB nwere otu nzaghachi: n'etiti ha ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị otú ahụ na nsụgharị maka Windows, Linux na MacOS ma rụọ ọrụ otu n'ime usoro ndị a nile. Otú ọ dị, ụlọ ọrụ dị otú ahụ ka dị, otu n'ime ha bụ Etcher. N'ụzọ dị mwute, ọ ga-ekwe omume itinye ya na nchịkọta ọnụ ọgụgụ dị ole na ole.
IPhone ndabere na kọmputa na iCloud
Ntụziaka nzọụkwụ a na-akọwa n'ụzọ zuru ezu otu esi edozi iPhone na kọmputa gị ma ọ bụ na iCloud, ebe a na-echekwa ndabere akwụkwọ, otu esi weghachite ekwentị ya, otu esi ehichapụ ndabere na-enweghị isi na ụfọdụ ozi ndị ọzọ nwere ike ịba uru. Ụzọ dịkwa mma maka iPad.
Esi ewepu nseta ihuenyo na iPhone XS, XR, X, 8, 7 na ụdị ndị ọzọ
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji nseta ihuenyo (nseta ihuenyo) na gị iPhone ka ịkekọrịta na onye ma ọ bụ nzube ndị ọzọ, nke a abụghị ihe siri ike na, ọzọ, e nwere ihe karịrị otu ụzọ isi mepụta foto dị otú ahụ. Nke a nkuzi nkọwa otú iji screenshot na niile Apple iPhone ụdị, tinyere iPhone XS, XR na X.
Ịnyefe kọntaktị sitere na iPhone ruo gam akporo
Ị nwere ike ịnyefe kọntaktị site na iPhone na gam akporo na ọ fọrọ nke nta ka ọ dị na ntụgharị. Otú ọ dị, n'ihi eziokwu ahụ na ngwa Kọntaktị na iPhone, enwereghị nkọwa ọ bụla gbasara ọrụ mbupụ, usoro a nwere ike ịjụ ajụjụ maka ụfọdụ ndị ọrụ (Agaghị m atụle iziga kọntaktị n'otu n'otu, ebe ọ bụ na ọ bụghị ụzọ kachasị mma).
Ọnọdụ modem IPhone
Ọ bụrụ na ị nwere iPhone, ịnwere ike iji ya na ọnọdụ modem site na USB (dịka modem 3G ma ọ bụ LTE), Wi-Fi (dị ka ebe ntinye aka mobile) ma ọ bụ site na njikọ Bluetooth. Nke a nkuzi kọwapụtara otu esi eme ka mode modem na iPhone ma jiri ya nweta Internet na Windows 10 (otu maka Windows 7 na 8) ma ọ bụ MacOS.
Esi gbanyụọ T9 (ngbanwe) na keyboard ụda na iPhone na iPad
Otu n'ime ajụjụ ndị kachasị maka ndị nwe ọhụrụ nke Apple ngwaọrụ bụ otu esi gbanyụọ T9 na iPhone ma ọ bụ iPad. Ihe kpatara ya dị mfe - AutoCorrect na VK, iMessage, Viber, WhatsApp, ndị ozi ndị ọzọ na mgbe ị na-ezipụ SMS, mgbe ụfọdụ, ọ na-anọchi anya okwu na ụzọ a na-atụghị anya ha, ha zigara onye na-ezigara ya na ụdị a. Nkụzi a dị mfe na-egosi otu esi gbanyụọ AutoCorrect na iOS na ihe ndị ọzọ metụtara ịbanye ederede site na ihuenyo ihuenyo nke nwere ike ịba uru.
Esi nweta nseta ihuenyo na Mac OS X
Ịnwere ike iji nseta ihuenyo ma ọ bụ nseta ihuenyo na Mac na OS X na-eji ọtụtụ ụzọ enyere na sistemụ arụmọrụ, ọ dị mfe ime ya, n'agbanyeghị ma ị na-eji iMac, MacBook ma ọ bụ Mac Pro (Otú ọ dị, a kọwara ụzọ maka Apple ). Nke a nkuzi kọwaara otu esi eji screenshots na Mac: esi ewepụta foto nke ihuenyo dum, ebe dị iche ma ọ bụ windo mmemme na faịlụ na desktọọpụ ma ọ bụ na windo ihe maka ịbanye n'ime ngwa ahụ.
Esi abanye n'ime iCloud site na komputa
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye n'ime iCloud site na kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ na Windows 10 - 7 ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ọzọ, ị nwere ike ime ya na ọtụtụ ụzọ, nke a ga-akọwa na ntinye na ntụziaka a. Kedu ihe ọ ga-achọ maka? Dịka ọmụmaatụ, iji detuo foto site na iCloud na kọmputa Windows, iji nwee ike itinye ndetu, nchetara na ihe omume kalịnda site na kọmputa, na n'ọnọdụ ụfọdụ ịchọta iPhone furu efu ma ọ bụ zuo ohi.
Esi ewepu Mac OS X
Ọtụtụ novice OS X ndị ọrụ na-eche otú e si ewepu mmemme na a Mac. N'otu aka, nke a bụ ọrụ dị mfe. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ntụziaka banyere isiokwu a adịghị enye ozi zuru ezu, nke na-eme mgbe ụfọdụ nsogbu mgbe ị na-iwepụ ụfọdụ ngwa ngwa. N'ime nduzi a, ị ga-amụta n'ụzọ zuru ezu banyere otu esi ewepu usoro ihe omume site na Mac na ọnọdụ dị iche iche na maka usoro dị iche iche nke mmemme, nakwa otu esi ewepu usoro usoro OS X ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Bootable USB flash drive Windows 10 na Mac
Ntuziaka a na-akọwa otú ị ga-esi mee ka Windows 10 USB flash drive na Mac OS X wụnye usoro ma na Boot Camp (ya bụ, na ngalaba dị iche na Mac) ma ọ bụ na PC ma ọ bụ laptọọpụ PC. Enweghi otutu uzo iji dee ngwa ngwa Windows na OS X (n'adịghi ka Windows usoro), mana ndi di na ya di, iji zuo ezu.
Esi nyefee vidiyo na foto sitere na iPhone na TV
Otu n'ime ihe omume nwere ike ime na iPhone bụ ịnyefee vidiyo (yana foto na egwu) site na ekwentị na TV. Ma nke a anaghị achọ ọkwa Apple TV ma ọ̄ bụ ihe yiri ya. Ihe niile ị chọrọ bụ TV nke oge a na nkwado Wi-Fi - Samsung, Sony Bravia, LG, Philips na ihe ọ bụla ọzọ.
Esi nyefee data sitere na iPhone ruo gam akporo
Mgbanwe site na iPhone ruo gam akporo, n'echiche nke m, dịka siri ike karịa nke ọzọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji ngwa Apple dị iche iche ruo ogologo oge (nke a na-anọchite anya Ụlọ Ahịa Play, ebe ngwa Google dị na Store Store). Ka o sina dị, ịfefe ọtụtụ data, kọntaktị, kalenda, foto, vidio na egwu dị mma ma rụọ ọrụ dị mfe.
Esi gbanyụọ mmelite na Mac
Dịka sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ, MacOS na-agbalị ịnwụnye mmelite. Nke a na-eme na akpaghị aka n'abalị ma ọ bụrụ na ị naghị eji MacBook ma ọ bụ iMac, ma ọ bụrụ na agbanyụghị ma jikọọ na netwọk, ma na ụfọdụ (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụfọdụ ngwanrọ na-emetụta mmelite), ịnwere ike ịnweta ozi ọhụụ na ọ gaghị ekwe omume ịwụnye mmelite na ndụmọdụ iji mee ya ugbu a ma ọ bụ na-echetara mgbe e mesịrị: n'otu awa ma ọ bụ echi.
Esi lelee TV n'igwe na mbadamba ekwentị, na iPhone na iPad
Ọ bụghị onye ọ bụla maara na a pụrụ iji ekwentị ma ọ bụ iPhone ekwentị, nakwa dị ka mbadamba, na-ele TV na netwọk, na mgbe ufodu ọ na-enwere onwe ya mgbe ọ na-eji netwọk Ịntanetị 3G / LTE, ọ bụghị naanị na Wi-Fi. Na nyocha a - banyere ngwa ndị kachasị na-ekwe ka ikiri TV TV na-adịghị na-ekiri (ma ọ bụghị naanị) na mma dị mma, banyere ụfọdụ n'ime atụmatụ ha, nakwa ebe ị ga-ebudata ngwa TV ndị a n'Ịntanet maka gam akporo, iPhone na iPad.
Nne na Nna Control na iPhone na iPad
Nke a nkuzi kọwaara otu esi eme ma melite njikwa nna na iPhone (ụzọ ga-arụ ọrụ maka iPad), nke na-arụ ọrụ maka ijikwa ikikere maka nwatakịrị na-enye na iOS na ụfọdụ nuances ndị ọzọ nwere ike ịba uru na ihe gbasara isiokwu ahụ. N'ikpeazụ, ihe mgbochi ndị a wuru na iOS 12 na-enye ọrụ zuru ezu ka ị ghara ịchọ ịchọpụta ihe omume ndị nne na nna na-achịkwa maka iPhone, nke nwere ike ịchọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi njikwa njikwa nna na Android.
https://termotools.com ig.termotools.com © IOS na MacOS 2020